अनेरास्ववियू शैक्षिक आन्दोलनको एउटा बिशाल नेता संगठन हो | दर्पण दैनिक
अनेरास्ववियू शैक्षिक आन्दोलनको एउटा बिशाल नेता संगठन हो
प्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन ७ गते १२:१०
नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका अनेरास्ववियु सुर्खेतका संयोजक धुपेन्द्र शाही संगठनका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी बहन गर्दै केन्द्रिय कमिटी सचिवालय सदस्यमा मनोनीत भएका छन । बिगत लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएका धुपेन्द्र शाहीसंग राजनीतिक तथा पारिवारिक जिवन बिषयमा केन्द्रित रहेर अनेरास्ववियु सुर्खेतका संयोजक धुपेन्द्र शाहीसंग दर्पण दैनिककर्मी खगेन्द्र हमालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाईंको बाल्यकाल कसरी बितेको थियोे ?
२०४५ साल कार्तिक २३ गते बुवा पदम बहादुर शाही र आमा पारा देबि शाहिको कोखबाट मध्यम बर्गिय परिवारमा मेरो जन्म भएको थियोे । मेरो बाल्यकाल भने सुखमय तरिकाले बितेको हो । मलाई खाना लगाउन शैक्षिक खर्च लगायतको कुनै अभाव भएन । दैलेख जिल्ला चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा न.४ मा जन्मेको मान्छे मैले यसरी विद्यार्थीको नेतृत्व गरेर भविष्यमा राजनीति गरौंला भन्ने सोच्न त के कल्पना पनि गरेको थिएनँ तर जिवनमा जे सोचिदैन त्यो चाहि हुदोरहेछ । सानै उमेरदेखि बिर्टिस आर्मी बन्ने रहर थियोे । परिवारमा पहिलो सन्तान भएर पनि होला बुवा आमाले मलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो । सानै उमेर देखि एकदमै मिलनसार सबै संग मिल्ने, सहयोग गर्न रुचाउने, गलत कुरा सहन पनि नसक्ने, जिज्ञासुक स्वभाबको मान्छे हु म । त्यंहि भएर होला आज सबैको मायाले गर्दा यो ठाउँसम्मा आई पुगेको छु ।
तपाईंको शैक्षिक योग्यता कति हो।प्रारम्भिक पढाई कहाँ बाट सुरुवात गर्नुभएको थियोे ?
धर्मदेब माध्यमिक विद्यालय आयरपाटा दैलेखबाट प्राबि तहको शिक्षा आर्जन ग रे। त्यसपछि चामुण्डा माबि हाडकोट दैलेखबाट माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेको हुँ । पछि +२ science,Bsc hudai (IR)अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनैतिकमा र समाजशास्त्र मा डबल master degree गरेको छु ।
विद्यार्थी राजनीति यात्रामा तपाईंले कुन कुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ?
मैले संगठन विभिन्न तहमा संगठनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छु । माबि प्रा जन उच्च माबि प्रारम्भिक कमिटीमा सचिबको जिम्मेवारी बहन गर्दै अध्यक्ष बनेको थिए।त्यसपछि पब्लिक साइन्स क्याम्पसको सदस्य, सचिब, हुदै अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरे । सुर्खेत जिल्लाको सदस्य, सचिवालय सदस्य, जिल्ला उपाध्यक्ष हुदै अध्यक्ष भए । कार्यकालका हिसाबले चार कार्यकाल जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सफल भए । त्यसपछि अनेरास्ववियु को केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै यहासम्मा आउँदा पुन संगठनले केन्द्रिय सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।
तपाई राजनीतिमा पनि सक्रिय भइराख्नु भएको छ, पारिवारले कतिको समर्थन गर्नुहुन्छ ?
मलाई घरपरिवारबाट राम्रो समर्थन छ । संगठनका कामहरु हुँदा पारिवारिक सल्लाह अनुसार नै म हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्दछु । अहिलेसम्म घरपरिवार बाट राम्रो समर्थन रहेको छ ।
देशमा शैक्षिक क्षेत्र व्यापारीकरण हुदै जादा अनेरास्ववियूले के गरिरहेको छ ?
मेरो बिचारमा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको अवस्थामा अब संगठनले शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ।यतिबेला शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूको एउटै गुनासो के छ भने निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरू नाफामुखी भए । निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरिरहेको शैक्षिक व्यापारीकरणले डरलाग्दो रूप लिँदै छ । यसलाई रोक्ने, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र भएन । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू विभिन्न पार्टीलाई मोटो रकम दिई राज्य नै सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा नै पुगे । राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूलाई नै प्रभावमा लिएर मनोमानी ढंगबाट अगाडि बढेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।
सरकारको अदूरदर्शी शिक्षा नीति सत्ता हस्तक्षेप, सरकारी लापरबाही, जिम्मेवारी बोधको अभाव निरीक्षण, मूूल्यांकन, अनुगमन भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण विषयगत जनशक्तिको अभाव विद्यमान छ । केही प्राविधिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण छैन । मेडिकल इन्जिनियरिङ लगायतका क्षेत्रमा समेत सिट संख्या न्यून छ । यतिबेला आम समुदायको एउटै प्रश्न छ । अहिले निजी क्षेत्रमा ५०औं लाख तिरेर विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत मान्दैनन् यसबारे विद्यार्थी संगठनहरूले आवाज उठाउने कि नउठाउने ? भन्ने आजको ब्यापक बहसको विषय हो।शैक्षिक क्षेत्रमा भएका अव्यवस्था, राजनीतिकरण, व्यापारीकरण, खुलेआमको लुटतन्त्र सबैलाई थाहा छ तर किन आवाज उठाउन आन्दोलन गर्न सक्दैनन् विद्यार्थी संगठनहरू ? यो संवेदनशील प्रश्न विद्यार्थी आन्दोलनमा तेर्सिन पुगेको छ । अबको समग्र ध्यान शैक्षिक क्षेत्रमा नै पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।त्यसकारण यसबारे आगामी दिनमा हाम्रो संगठनले सकारात्मक कदम चाल्नेछ।
नेपाली विधार्थी आन्दोलनको इतिहासमा अनेरास्ववियूको महत्वपूर्ण स्थान किन र कसरी छ ?
विश्वमा प्राय सबै देशको राजनीतिक इतिहासमा विधार्थी आन्दोलनले मत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ त्यस्तै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पनि अनेरास्ववियुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।राष्ट्रियताको सवालमा अनेरास्ववियुले चलाएको सुस्ता बचाउ र सीमा सुरक्षा अभियान तथा दिल्ली सम्झौतासँगै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, नमिता–सुमिता हत्याकाण्ड र गायक प्रवीण गुरुङको हत्याको विरोधका साथै महँगी तथा शैक्षिक लगायतका आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट आएर राज्य सञ्चालनको अनुभव बटुलेका नेपाली राजनीतिकर्मीहरू पनि अनेरास्ववियुलाई राजनीतिक नर्सरी मान्दछन् । अनेरास्ववियुले शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र सिमित नभएर राष्ट्रको राजनैतिक आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग बन्दै करिब साढे दुइ शताब्दी लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, हिन्दु व्यवस्थामा आधारित उच्च जातीय सामन्ती केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यका अवशेष भत्काउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निमार्णका निम्ति इतिहास देखि हाल सम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। त्यसैले नेपालि विधार्थी आन्दोलनको इतिहासमा अनेरास्ववियुको महत्वपूर्ण स्थान छ।
अन्तिममा तपाईका शुभचिन्तक नेता कार्यकर्ताहरुलाई केहि भन्न चाहानु हुन्छ कि?
देश तथा बिदेशमा रहनुभएका सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ताहरुलाई मेरो एउटै सुझाव छ।तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहिबाट सक्रिय रुपमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुहोस।संगठनको निर्देशन अनुसार संगठनात्मक गतिविधिहरु अगाडी बढाउनुहोस।पाप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै बिशाल संगठन निर्माणमा जुट्नुहोस । अनि मात्रै अनेरास्ववियु गन्तब्यमा पुग्नेछ । हाम्रो जित हुनेछ, हाम्रो जित हुनु नै नेकपा एमाले जिति हुनु हो, राष्ट्रको जित हुनु हो नेपाली जनताको जित हुनु हो । हामीले जित्यौ भने मात्रै नेपाली जनताले जित्नेछन।
'राजनीतिमा इमान्दारीताको खाँचो छ'
२०७८ आश्विन २६ गते ०४:४८
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि चार वर्ष पूरा भईसकेको छ । यो समय अवधिमा कति जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरे भने कतिपयले भने यो वा त्यो बहानामा प्रतिबद्धता तोड्दै गए । विकास निर्माणका कार्यहरू त परै जाओस् समाजका अत्यावश्यक काम पनि गर्न बिर्से । कतिपय जनप्रतिनिधि त पैसा पावर र पहुँचको आडमा भ्रष्टाचार गर्न पनि लिप्त भए । अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि समाप्त हुन केही महिनामात्रै बाँकी छ । करिब चार वर्षको कार्यकालमा स्थानीय चुनावताका गरेको घोषणा र प्रतिबद्धता कल्ले कति पूरा गरे भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष मुल्यांकन तथा लेखाजोखा गरिरहेका छन र गर्ने नै छन । केही जनप्रतिनिधिले भने स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ५ (साविकको भकान्जे गाविस) का अध्यक्ष ङिमाछिरी लामासँग दिगो विकासलगायत समग्र विषयमा रहेर दर्पण दैनिकका केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
राज्य संचालन गर्न सक्ने क्षमतावान विद्यार्थी उत्पादन गर्छु : ल्हाक्पा शेर्पा
२०७८ आश्विन १८ गते ०८:५१
लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको श्री चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयमा १ सय ७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विस २०६४ सालसम्म कक्षा ८ सम्ममात्रै अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको सो विद्यालयमा विस २०६५ सालयता कक्षा ९ र १० पनि संचालन भईरहेको छ । विगत केही समययता उक्त विद्यालयमा ल्हाक्पा शेर्पाले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन । शेर्पा नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हुन् । हाल सो विद्यालयमा १५ जना शिक्षक शिक्षिकाहरुले अध्यापन गराईहेका छन् । झन्डै दुई वर्षयता कोरोना कहरका कारण भनेजस्तो ढंगबाट पठनपाठन संचालन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कयौं विद्यार्थीको पढाई कमजोर हुँदै गएको छ । सुविधा सम्पन्न ठाँउ र आर्थिक सम्पन्न व्यक्तिका लागि नीजी तथा बोर्डिङ स्कुलले अनलाइन क्लास तथा भौतिक उपस्थितिमै सहजतापूर्वक कक्षा संचालन गरे पनि भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावमा हुर्केका विद्यार्थीका लागि कोरोना महामारीले आफ्नो अध्ययनलाई झनै पछाडी पारेको छ । पछिल्लो केही समययता सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक सस्थाहरु खोल्न भनेको छ । अहिले अवस्था अनुसार प्रायः सबै विद्यालयहरु खुलेका छन् । प्रस्तुत छ चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयका उनै नवनियुक्त प्रधानाध्यापक ल्हाक्पा शेर्पासँग दर्पण दैनिकका लागि केशर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: